Shiinaha kartoo Dog kartoo Dog soosaarayaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Hoyga > Waxyaabaha la xiriira xayawaanka Waxyaabaha la xiriira xayawaanka > Jaakada badbaadada eeyga
Marka loo eego xumbo dhaqameedka, barkinta hawadu waxay kordhisaa raaxada. Buuxinta barkinta hawada ee isla mugga ayaa ka weyn tan barkinta xumbada. Jaakada nolosha ee barkinta la buufin karo waxay ku keydisaa lacagta safarka iyo kaydinta.Xarashka nolosha milicsiga dhalaalaya! Waxaa si taxaddar leh loogu sameeyay eeyaha aan weligood biyo taaban.
Jaakada nolosha eeyga
Dongguan Chihao Dambiisha Warshadaha Co., Ltd., oo la aasaasay 2003, waa soo saare caan ah oo Shiine ah oo ka ganacsada. Ganacsigeena ugu weyn wuxuu iibinayaa naqshadeynta iyo soosaarida alaabada boorsada, sida: boorsada laptop-ka, boorsooyinka ardayda, jaakada nolosha eeyga, bacda xafaayada, eyga qolleyda, boorsada dibedda, boorsooyinka isboortiga, bacaha shiraaca, boorsooyinka garabka iyo alaabooyinka kale, isla waqtigaas waxaan sidoo kale horumarinnaa ganacsiyada kale, sida naqshadeynta iyo soosaarka: jaakada nafta eyga, boorsada, boorsada, boorsada qalabka, boorsada qadada, boorsada qoriga, boorsada taatikada ciidanka, bacda xayawaanka, iwm Si loo daboolo baahiyaha shakhsi ahaaneed ee macaamiisha, waxaan sidoo kale dhisnay waax ka caawisa macaamiisha inay helaan qaybaha kale ee wax soo saarka ee Shiinaha.Halka Shiinaha waxaan leenahay silsilad sahay adag oo qaan gaar ah kor iyo hoos, udub dhexaadkeedu waa faa'iidada ugu weyn, sababtoo ah faa'iidada noocan oo kale ah, waxaan si dhakhso leh, ka fiican oo ka sii fiican u adeegi karnaa dhammaan macaamiisheenna, siin karnaa adeegyo habeyn wax soo saar wax ku ool ah oo loogu talagalay macaamiisheenna, waxaan sidoo kale macaamiisha ku siin karnaa badeecado sumaddeena asalka ah oo tayo sare leh. sa 600 oo shaqaale ah iyo 500 oo mashiin wax soo saar ayaa ah hantida ugu weyn, sida aan horay u sii soconno, sida aan u kala hormarino isku xirnaanta aadanaha, sida aan u kala hormarino xuquuqda shaqaalaha, sida aan u kala hormarino xuquuqda macaamiisha. 18000 mitir murabac ah ayaa noo ogolaanaya inaan soo dhaweyno qalab badan oo wax soo saar iyo shaqaalaha, iyo baaxadda weyn waxay noo oggolaaneysaa inaan si dabacsan u hawlgalinno khadadka wax soo saarka si loo gaaro wax soo saar wax ku ool ah.Waxaan macaamiisha ka siineynaa naqshadeynta wax soo saarka, soosaarka muunadda, soosaarka tirada badan, saadka xamuulka, caadooyinka iyo adeegyada isdhexgalka caadooyinka.Haddii aad u baahan tahay inaad qaabeeyaan alaabada boorsada ama wakiilkayaga sumadda, fadlan nala soo xiriir:adamdavis@fofrerbag.com
1. Jaakada ugu wanaagsan ee eeyaha - Sii xayawaankaaga jaakad badbaado oo qurux badan:
(1) Marka loo eego xumbo dhaqameedka, barkinta hawadu waxay kordhisaa raaxada. Buuxinta barkinta hawada ee isla mugga ayaa ka weyn tan barkinta xumbada. Jaakada nolosha ee barkinta la buufin karo waxay ku keydisaa lacagta safarka iyo kaydinta.Xarashka nolosha milicsiga dhalaalaya! Waxaa si taxaddar leh loogu sameeyay eeyaha aan weligood biyo taaban.
(2) Giraanta kala-soocidda badbaadada degdegga ah waa giraanta nooca D ah, maaddadu waa ammaan oo wax ku ool ah.
(3) polyesterku wuxuu leeyahay dabacsanaan xoog leh; Kordhi raaxada; Velcro si xor ah ayaa loo hagaajin karaa waxayna leedahay noocyo kaladuwan
(4) Qufulka amniga adag ee tayada sare leh ayaa si xor ah u hagaajin kara suunka go'an, aamin ah oo adag, dammaanad labalaab ah.
(5) Kuwa leh dhadhanka iyo jacaylka moodada, eygaaga u xiro dhar qurux badan oo diirran si aad uga fogaato gubashada qorraxda, mindi iyo timo wasakh ah xiirista kadib.
2. Xuduudaha alaabta (qeexitaanada) jaakada nafta eyga
jaakada nolosha eyga
Polyester + nylon + PVC u dhow deegaanka
4.Baakadaha iyo gaadiidka jaakada nolosha eyga
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: 20 * 10 * 30cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakadka iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka adiga.
(3) faahfaahinta xirxirida: 20cm X 10cm X 30cm.10PCS / box.Carton wax: K = K 5 lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) FCL miisaanka guud: 13.5kg.
(5) FCL miisaanka saafiga ah: 12KG.
S6: Imisa maalmood ayaa ah waqtiga hogaaminta shaybaarkaaga? Ma bixisaa shaybaar? Ma bilaashbaa mise waa siyaado?
Calaamadaha kulul: Jaakada badbaadada eeyga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka